England vs New Zealand: Uvavanyo lokuqala - England Zithi Honours - Thandani Cricket
0 England vs New Zealand: Test First - England Zithi Honours
ipapashwe 19th UCanzibe 2013 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Test Cricket. uvuselelwe 27th UCanzibe 2013 .
Emva kokuqalisa kakubi ngolo hlobo lo mdlalo uphele uvavanyo lokuqala ngesantya intamo lekhefu namhlanje - kwaye yeka nokusebenza uStuart Olubanzi ukukhulisa iflegi ngokwesindlwane.
wenza ke kuphela club 20 uyinqaba isebenza kubaluleke (ongaphumiyo) njengoko beza innings eNgilani ukuya ekupheleni ngokukhawuleza yaye besilela kodwa walandela ukuba ehlaselwe ephakamileyo eqengqwe ngokukhawuleza-medium leyo ezafika umyalelo New Zealand.
Xa Broad is on-nengoma enjengeyobusuku ukuba namhlanje akukho nje akukho ukumvimba yaye bangabi ingadlaleki. Ixesha lokugqibela wabahlangula umdlalo ngale ngokuchasene Utshaba Old kwibala elimbhoxo kwi 2009 ukungqubana nothuthu. I kwabhalwa amagqabantshintshi umdlalo ngaloo mini waza wabahlalisa iminyaka embalwa nje ukuze ndikwazi ukubukela kwakhona kwaye kwakhona. That day he got a 5‑for, kufunwa scalps ka Watson, Ponting, Hussey, Clarke Haddin - ngoko phantse umyalelo Australian top.
Kwakungekho nto na batsman yayinawo. Kwakunye 5 iiwikethi kwakukho imidlalo abangabalekiyo zafa kunye nokubethwa ze bat. Wayemele kwingxowa iqashiso. Kwakuba kakhulu kunene ngathi ethile Aussie bowler ekhawulezayo-medium. ... igama lakhe uya kusinda kum. ... wathabatha iiwikethi embalwa awayenzayo. ... oh yes, Glenn McGrath.
Kwaye enye namhlanje - kodwa eli xesha iiwikethi ngaphezulu. Ngoku kusiza ukufumana Olubanzi zokudubula ngolu hlobo kakhulu rhoqo. Uye ngokucacileyo italente kunye nesiqinisekiso self. Okubangel 'umdla kukuba kuvavanyo Khan emva 2009 England batted kuqala Broad, oye ngaphandle fomu nge willow mvanje, embetha ezithile ukuze emva kwexesha ezibalulekileyo isebenza khona. naluphi na ukuqondana?
heroics Broad kaThixo (and let’s not for­get James Ander­son claimed a 5‑for in the Kiwi’s first innings and two wick­ets in their second) wazenza mntu wumbi, amanye eshiyeka eNgilani bat. Kulungile ukuba umdlalo amanqaku ephantsi kodwa phantse yonke oda phezulu (kuquka Ngaphambi owaba umdlalo ukulibala kunye bat) ayiphumelelanga. Ingcambu i ume ngaphandle, ngaphandle kuphela kunye kid ngokucacileyo i omkhulu kwixesha elizayo. Trott wenza Kulungile kodwa ijuri isekhona ngaphandle kwi Ingcambu kaThixo Yorkshire iqela-iqabane Bairstow nokuba P. ibuyisela kuba Uthuthu kungenzeka Bairstow uya kwenza indlela. Eoin Morgan okwangoku kanobom kwishishini lakhe kumboniso freak leyo i IPL. Uye wenza ukuba ukhetho ngoko aphambukele khona. Amathuba ukuba bekuya kuba phakathi Morgan ne Bairstow loo ndawo umyalelo ophakathi wokugqibela kodwa Morgan wanyula ubutyebi phezu uzuko. umnxeba wakhe.
Uvavanyo elandelayo iintsuku ezintlanu kuphela kude Headingley kwaye kusenokwenzeka England aya kuba ubukhulu becala ingaguqukanga. Bresnan ukuze asuse Finn ababesazi umdlalo kunokuba iyathula (iiwikethi bakhe abane kwamangeno yokuqala bamthomalalisa kancinane) kodwa ke kwakhona iingqikelelo wam lo mdlalo ngasekhohlo into obunqwenelekayo.
tags: Ostreliya, eNgilani, Uvavanyo lokuqala, IPL, Jimmy Anderson, Lords, Nyu Zilend, Steven Finn, Stuart Broad, tim Bresnan
Kwenzeka ntoni ukuba 2018
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (108 izimvo)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (87 izimvo)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Umdlalo we-luvo? (77 izimvo)Yilaa xesha kwakhona - ubusuku obude, umoya obandayo, kodwa kungekudala unomathotholo uya umlilo ebomini baze bazise izandi zasehlotyeni Australian ezindlebeni zethu. England uya kuza ...
Yintoni engalunganga nenkqubo yokuhlelwa uvavanyo ICC? (76 izimvo)Nabani lulandelayo yeqakamba uvavanyo baya kwazi ukuba onke amacala kudidi, umzekelo, ngexesha lokubhala uMzantsi Afrika (ngokufanelekileyo) Ubekwe kwelona candelo lihle kwihlabathi. Kudala ndiyivile loo nto ...
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (33.9k izimvo)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (17.2k izimvo)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (6.7k izimvo)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...